Ioyile kaPatrick Kramer kwi "Reflection and introspection" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
"Ukucamngca nokuzazisa" kwioli nguPatrick Kramer
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo besiphambi kobuhle obukhethekileyo kwioyile, i-acrylic okanye ipeyinti ye-pastel, ungalibali ayiveli kwi-watercolor. Uhlobo lomsebenzi esiqhele ukuluqhela ukusuka ezakudala ezikhulu zokupeyinta Kwaye ayisiyonto imbi ukuyikhumbula amaxesha ngamaxesha, njengoko kusenzeka ngeoyile yangoku kwaye efuna ezinye iinjongo okanye iinjongo.
Kwenzeka ngoKramer "UkuCamngca nokuTyhila," umzobo weoyile oyinyani apho kunzima ukufumana ezo nkcukacha apho ingqondo yethu iqinisekisa khona ukuba sijamelene nomzobo endaweni yefoto. Ukuba uyayikhangela ungayifumana, kodwa inyani kukuba inzima kakhulu, kuba uPatrick Kramer uyiphethe yonke imiba yokwenyani kulo msebenzi ubaluleke kakhulu.
Ukuba sinokuthi lo msebenzi ngowokwenyani kwaye awunangqiqo, kungenxa yokubonisa ekufuneka kubonwe ngelixa sipeyinta umsebenzi, into esuswe kwaye ithambekele kwinto ethe kratya kwi-surreal, nokuba iya ngqo kwizinto eziyinyani. Oku sinokukubona kuwo wonke umsebenzi kaKramer, nangona sikwafumana ukuxhomekeka kwezinto.
Lo mzobo ngokwawo unendlela ekhethekileyo yokucacisa imbonakalo kunye ne yintoni ubume yento eyenziwe ngomthi kwibhola yentsimbi ithatha enye kwesinye sezandla zayo. Umzobi okhangela ezinye iikona kunye nezinye iindawo ezinezo mannequins zomthi ezibonisa kakuhle kwinxalenye yomsebenzi wakhe kwaye zithatha indawo yemodeli yendalo.
Unayo iwebhusayithi yabo kweli qhagamshelo, kwaye kuyo unako fumanisa imisebenzi emikhulu eyenziwe nguKramer. Ngokwenyani wonke umsebenzi wabo kunye unomgangatho obalaseleyo wokusizisela ezinye zezifundo zabo zobugcisa bokupeyinta. Into ebalulekileyo yokwazi ubuchwephesha kwaye ukwazi ukubongeza kwisitayile sakho.
Ndikushiya ne enye yeevidiyo zakhe Apho abonisa khona inkqubo yakhe yokuyila kunye neenkcukacha:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » "Ukucamngca nokuzazisa" kwioli nguPatrick Kramer
I-Anatomy yeebhaluni zezilwanyana ezingafunyanwanga nguJason Freeny
Iincwadana ezingama-25 zespanish zesoftware eziyimfuneko kuyilo